October 4, 2020 News36mediaLeaveaComment on रुकुम घटनामा मा’रिएका नववराज बिकको घर पुगेर बन मन्त्रीले पुरानो घाउ को’ट्या’ए, न्याय चै कहिले दिने सरकार?
काठमाण्डौं । वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले रुकुमको सोती घटनाका पी’डित परिवारसँग आइतबार भेटघाट गरेका छन् । उनले त्यस समयमा पी’डित परिवारलाई सरकारले राहत दिने निर्णय गरिसकेको जानकारी दिए । तर नवराज र उनका साथीहरुलाई के सजाय हुने बारेमा बस्नेतले थप कुरा भने गरेनन् ।भिडियो हेर्नुहोस यो घटना ४ महिना अघिको हो जतिबेला तीन वर्षदेखिको […]
५ बर्षिय छोरीको योनी बाट रगत बगिरहेको थियो, आमा आत्तिदै हस्पिटल पुर्याई यथार्थ बुझ्दा चकित !
October 4, 2020 News36mediaLeaveaComment on ५ बर्षिय छोरीको योनी बाट रगत बगिरहेको थियो, आमा आत्तिदै हस्पिटल पुर्याई यथार्थ बुझ्दा चकित !
साथीसँग खेलिरहेकी पाँच वर्षीया बालिकालाई छिमेकी एक किशोरले बो’लाए । चिनजानकै दाइले माया गरेर बोलाएपछि ती बालिका चकलेट पाइने आशा राखेर गइन्। तर उनलाई के थाहा १७ वर्षीय छिमेकी दाइले आफूलाई क’र’णी गर्लान् भन्ने। तिनै छिमेकी दाइ उनका लागि रा’क्षस बने। आमा खेतमा गएका बेला अबोध बालिका आफ्नै घरमा ‘ब ला’त्कृ’त भइन्। यो घटना साउन […]
October 4, 2020 October 4, 2020 News36mediaLeaveaComment on ससुरा-बुहारीको अवै’ध स’म्बन्ध ! सासुले रं’गेहात समातेपछि घ’टना खुल्ने ड’रले सासुलाई वि’ष खुवाइयो (भिडियो)
काठमाडौ। ससुरा बुहारीको स म्ब न्ध बाबु छोरीको जस्तै हो । तर यि दुईबीच पनि सोच्न नसकिने स म्ब न्ध बाहिरिएको छ । पनौतीमा यस्तै सोच्नै नसकिने स म्ब न्ध का बारेमा खुलासा भएको हो । आफ्नै छोराको श्रीमती (बुहारी) संग ससुराको न रा म्रो स म्ब न्ध खुल्ने भएपछि सासुको ज्या न लिने कोशिष […]